Ummata nagaa dhowwatanii, ummata waliin jiraachuun matumaa hindandaa’amu! | QEERROO
Ummata nagaa dhowwatanii, ummata waliin jiraachuun matumaa hindandaa’amu!
(Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Onkoloolessa 30,2018, Finfinnee, Oromiyaa) Uummata nagaa dhowwatanii: waraanaan ajjeesaa, kaan gaddaan garaa madeessaa, kaan cabsanii naaffisuu fi jaamsuun egeree jiruu itti dukkaneessaa; uummata waliin jiraachuun matumaa hindandaa’amu hinyaadamus.
Uummatni Oromoo baraan gadda keessummeessaa, gaddaaf gadoo kuufataa yowwaana gahus, imimmaan isaa qoorsuuf tattaaffii taasiseen mirga isaa kabachiifachuuf qabsaa’aa turullee hanga har’aatti qe’ee isaarratti ajjeefamuufii araddaasaa irraa buqqaa’uun yakki hammaatan irratti raawwataa jira. Qeerroo Bilisummaa Oromoo nageenyi uummata Oromoo fi saboota ollaa akkasuma Oromiyaa keessa jiraatanii boora’uun uummatni nagaan humna hidhatee jiruun ajjeefamuun kan balaaleffatu ta’uun beekamaadha.
Waraana gidduudhaas nagaan argamu gama kamiinuu kan hinjirre, waraanaan kasaaraa qabeenyaaf dhabama lubbuu danoomsuun komii babal’isee ittuu biyyi akka nagaa dhabdu gochuusaa hubatuun rakkinni uummata Oromoo irraa gahuuf uummata cunqurfamoo impaayera biyyattii irra gahu karaa nagaa akka furamu hawwa; kanaafis qabsaa’aa tureera itti fufees qabsaa’a. Kana galiin gahuufis; Qabsoo walitti fufiinsaa uummata isaa gurmeeffatuun sagalee karaa nagaa dhageessifataa akkuma baroota hedduu dabarsaa jiru itti fufee jira. Rakkinni uummatakoo haa furamu jedhanii karaa nagaa ta’een sagalee dhageessifachuun, karaa nagaan rakkoo qaban ibsachuun qaroomina siyyaasaa isa olaanaa ta’uuttis Qeerroo Bilisummaa Oromoo nii amana.
Kana danquuf uummata karaa nagaa hiriraan sagalee isaa dhageessifatu, rakkoo qabuuf yaaddoo isaa karaa nagaan ibsatu irratti dhukaasuun ajjeesuu fi madeessuun balaaleffatamaa fi hadheeffatamaa ta’uus cimsee dhaammata. Qeerroon Bilisummaa Oromoo haala biyya keenya Oromiyaa keessatti humna hidhatee jiruun uummata nagaa Oromoo irra gahaa jiru, ajjeechaa Kibba Oromiyaa Gujii fi Lixa Oromiyaa Wallagga keessatti uummata Oromoo irra gahaa jiru cimsee balaaleffata. Yakkoota ajjeechaa uummata irratti raawwataa dirree dimokiraasii ballisne jechuun kan hindanda’amneef nagaan biyyattii deebi’eera jechuun kan wal hinqabatne ta’uus asumaan dhaammata.
Uummata shororkeessaa waraana hidhatee jiru itti bobbaasuun uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaa hidhatanii miira sodaachisuuu keessa bulchuuf abbaluuf “humnaan sin bita!” jedhanii yaaduun kan milkooma irra badiisni isaa caalu ta’uu hubatuun qaamni hidhannoon uummata shororkeessuuf uummatatti bobbaa taasise uummata keenyarraa akka dhaabbachuu qabu Qeerroo Bilisummaa Oromoo gad jabeessee gaafata. Lubbuu ilmaan Oromoo tibbana darbaa jiruuf qaamni yakka ajjeechaa raawwate qoratamee seerratti dhiyaatuu akka qabus nii gaafanna!
Ajjeechaa deettii Oromoo fi saboota Cunqurfamoo impaayera biyyattii irratti raawwachuun kan balaaleffatamu ta’uu hubatuun nageenyi sabaaf sab-lammii biyyatti, addatti nageenyi uummata Oromoo haa mirkana’uu jenna. Gama keenya gama Qeerroo Bilisummaa Oromoo tiin nageenya uummataa mirkaneessuuf yeroo kam olitti amma kan hojjennu ta’uus nii ibsanna!
Maayii irratti; Bakka nagaan uummataa boora’ee jirutti dirree dimokiraasii bal’isna jedhanii yaaduuf ballisne jedhanii dubbachuun hindanda’amu. Waan ta’eef nagaa uummataaf mootummaas ta’ee qaamni kamuu dursa kennuu akka qabu dhaammanna!